Kulunkii ooo bulshada: wacyaglinta Tahriibka - Telling the Real Story
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ku kallifaya dhalinyarada Soomaalida ah inay u safraan safarka halista ah ee Liibiya waa la'aanta macluumaad habboon. Tahriibiyeyaashu waxay qarin doonaan runta ka sheegashada xun ee ka sugaysa socdaalayaasha aan caadiga ahayn ee ku sugan Liibiya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku guuleysatay inay gaaraan Yurub waxay sheekooyinka uga sheekeeyaan noloshooda cajiibka ah ee halkaas ka jirta. Tani waxay bilaabaysaa inay wax ka badasho ololayaasha wacyigelinta ee lagu bartilmaameedsanayo dhalinyarada lana wacyigaliyo halista dhabta ah. Dhibbanayaasha tahriibintu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ololahan.
Fiidiyowgaan wuxuu muujinayaa mid ka mid ah munaasabadda noocan oo kale ah oo ay soo qabanqaabisay Ururka Dhallinyarada Qaranka ee Somaliland. Madaxweynaha ururku wuxuu leeyahay:
“Munaasabadda maanta, kuwii soo maray xaqiiqda safarka aan caadiga ahayn waxay dadka hor yimaadaan oo ay uga sheegaan dhibaatooyinka ay kala kulmeen. Dhacdadani waxay dhameystiri doontaa dadaallada hore ee kor loogu qaadayo wacyiga iyadoo dadka loo oggolaanayo inay bartaan xaqiiqda socdaalka aan caadiga ahayn."
Dhageystayaashu waxay si taxaddar leh u dhegeysteen sheekooyinka naxdinta leh ee lagula dhaqmay gacmaha tahriibiyaasha Liibiya iyo dhibaatada ay ku hayaan badda. Wali waa goor hore in la sheego in ololahan uu gacan ka gaystay yareynta tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee aadaya Liibiya. Laakiin dhageysiga dhagaystayaasha runtii waxay gaadhay yoolkeedii ugu dhakhsaha badnaa - in la taageero wadahadal bulshada dhexdeeda ah oo ku saabsan dhibaatadan.
“Waxa ugu muhiimsan aniga waxay ahayd inaan la kulmo qof ka sheekeeyay waayo-aragnimadiisa la xiriirta tahriibiyaasha. Waxaan la wadaageynaa xanuunkiisa waxaanna sare u qaadi doonaa wacyiga ku saabsan mowduuca dhalinyarada dhexmara. Kulunkii maanta waxay ahayd mid cajiib ah! Waxay siisay dhallinta dhiirigelin, kor u qaadida wacyiga waxayna u dhaqan gashay sidii cashar u ah nolosha."